Sharma wuxuu abuuray 33 kaymo farsamadiisa gaarka ah | Cusbooneysiinta Cagaaran
Ninka abuuraya keymaha Hindiya sidoo kale wuxuu ku sameyn karaa beertaada
Dhab ahaantii qaar idinka mid ah oo na aqriya ayaa ogaan doona sheekada uu qoray Jean Giono ee la yiraahdo "Ninkii dhirtay" oo ka sheekeynaysa sheekada Elzéar Bouffier, oo ah adhijir khayaali ah, in kasta oo gebi ahaanba lagu kalsoon yahay, kaasoo sanado badan naftiisa u hibeeyay dhirayn dhul ballaaran ee Provence oo isu rogay aag ay ka buuxaan nolol iyo cagaar waxa mar ahaan jiray cidla cidla ah. Sheeko cajiib ah oo muujineysa sida aan u leenahay awooda aan ku badalno jawiga nagu hareeraysan adkaysi yar iyo shaqo wanaagsan, oo ay leedahay Shubhendu Sharma.
Sharmaarke Wuxuu ka tagay shaqadiisii ​​injineernimo inuu dhirta beero inta uu noolyahay. Iyadoo la adeegsanayo habka Miyawaki si loo beero dhiigbaxa loona beddelo aag kasta kayn iskeed isu ilaalisa dhowr sano gudahood. Waxay ku guuleysatay inay abuurto 33 keyn oo ku baahsan Hindiya muddo labo sano gudahood ah. Halkan waxaan ku tusaynaa sida uu u sameeyay.
Shubhendu Sharma, oo ah injineer warshadeed, wuxuu keenayaa suurtagalnimada keenista dabeecadda kaynta ee beertaada. Dhammaantood waxay bilaabeen markii Sharma iskaa wax u qabso ah si ay u caawiso dabiici yaqaan Akira Miyawaki inuu kaymo ka sameeyo warshaddii Toyota ee uu ka shaqeyn jiray. Farsamadii Miyawaki waxaa loo isticmaalay in dib loo soo nooleeyo keymaha laga soo bilaabo Thailand ilaa iyo Amazon, taasoo keentay in Sharma uu u maleeyo in ay sidaas oo kale ka sameyn karto India.
Sharma wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo moodellada iyo u abuuray nooc gaar ah waddankiisa ka dib markii wax ka beddello kala duwan la isticmaalayo qaar ka mid ah guryaha ciidda gaarka ah. Isku daygiisii ​​ugu horreeyay ee abuuridda kaynta waxay ahayd beertiisa u gaar ah oo ku taal Uttarakhand, halkaas oo uu ku guuleystay inuu abuuro mid sanadka gudihiisa. Taas oo siisay kalsooni ku filan oo uu wakhti buuxa ku tagi karo, shaqadiisana isaga tagi karo, isla markaana sannadka intiisa badan ku qaatay cilmi baarista habkiisa.
Sharma waxay abuurtay Afforestt, oo ah adeeg lagu bixiyo kaymo dabiici ah, duurjoogta ah oo is-ilaalin kara 2011. Kalimadiisa Sharma:Fikraddu waxay ahayd in la soo celiyo kaymaha dabiiciga ah. Iyagu keligood maahan kuwo waari kara laakiin haysan eber dayactir«. Mid kale oo ka mid ah go'aannadiisii ​​weynaa wuxuu ahaa inuu ka tago shaqadiisii ​​injineer dakhli badan ka helay shirkadda Toyota si uu dhirtiisa ugu beero noloshiisa oo dhan.
Bilaabashadu way adkeyd, laakiin hadda Sharma wuxuu leeyahay koox ka kooban 6 qof. Amarkooda koowaad wuxuu ka yimid shirkad Jarmal ah oo soo saarta alaabta guryaha oo dooneysay 10000 oo geed in la beero. Tan iyo markaas, Afforestt waxay u adeegtay 43 macmiil waxayna beereen kudhowaad 54000 geed.
1 Sidee ayuu u shaqeeyaa Afforestt
Sidee ayuu u shaqeeyaa Afforestt
Afforestt waxay bixisaa adeeg koontaroolid iyo fulin dhammaystiran oo ay ku jiraan qalab, qalabka, qalabka iyo wax kasta oo loogu baahan yahay mashruuca iyadoo la adeegsanayo habka Miyawaki. Nidaamku wuxuu ku bilaabmayaa tijaabinta carrada iyo raadinta waxa loo baahan yahay si looga dhigo mid sax ah oo lagu billaabayo in lagu beero nooc kasta oo dhir ah.
Dhulkii Waa inaad ahaataa uguyaraan 93 mitir laba jibbaaran si aad wax u barato noocyada dhirta iyo noolaha loo baahan yahay. Imtixaanada ka dib, dhirta ugu horeysa ee yar yar waxaa lagu diyaariyaa carro leh biomass si ay uga dhigto xitaa bacrin badan.
Finalmente wuxuu bilaabaa geedi socodka abuurka inta udhaxeysa 50 ilaa 100 nooc oo noocyada asalka ah. Wejiga ugu dambeeya wuxuu diiradda saarayaa bacriminta iyo waraabinta aagga labada sano ee soo socota, waqtigan ka dib, keymaha mar dambe uma baahnaan doonaan wax dayactir ah waxayna ku sii jiri doonaan kaligood. Faa'iidada weyn ee Afforestt waa moodelkeeda qiimaha jaban oo leh duurka yaryar oo kora qiyaastii hal mitir sanadkii.
Afforestt waxay abuurtay 33 keyn wadar ahaan 11 magaalo oo Hindiya ah oo uu doonayo inuu kordhiyo lambarkan. Sharma waxay leedahay qorshayaal badan oo ay ku kobciso oo ay u dhigato tikniyoolajiyadan si dad badani u hirgeliyaan.
Ayaa qorsheynaya daahfuraan softiweer ku saleysan lacag uruurinta si qof kasta awood inaad ku darto noocyada dhirta aad ka soo jeedo ee deegaankaaga aaladda. Markaa marka qof doonayo inuu beero keyntiisa, wuu ogaan lahaa noocyada ay qaadanayso si ay keligeed u waarto.
Mid kale fikradihiisa waa in la abuuro jawi aad ka soo goosan karto miraha beertaada ama dhagar ka fudud iibsiga suuqa. Hindise xiiso leh oo lagu abuurayo keymo aan u baahnayn wax dayactir ah iyo haddii aad rabto inaad sameysato mid kuu gaar ah waad booqan kartaa web ama la xiriir Sharma laftiisa info@afforestt.com.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Beeraha deegaanka » Ninka abuuraya keymaha Hindiya sidoo kale wuxuu ku sameyn karaa beertaada
Waan ka helay qoraalkaaga, waa mid aad u xiiso badan. Halka kuwa kale ay u heellan yihiin jarista dhirta oo dhan, kuwa kalena iyaga ayaa abuura. Waan jeclahay fikradda.
Thanks Beatriz! Haddii halkii aan burburin lahayn aan abuurnay, dhammaanteen waan ka fiicnaan lahayn
Mahadsanid Manuel. Qoraalkan ayaa iga dhigay dhoola cadeyn. Xidig ayaan dhigay markaan rabay inaan dhigo 5 laakiin mar dambe iima ogola in aan saxo. Mahadsanid
Waxba ma dhacaan! Muhiimadu waa inaad ka heshay boosta: =)
fikrad aad u wanaagsan
Waxaan ka shaqeeyaa adeeg aan tan ku qaban karno
Ku jawaab Carlos Toledo
Reactor-kii ugu horreeyay ee Dunida ee loogu talagalay 2016 Bixinta Awoodda Nukliyeerka ee Nabdoon